Iindaba-Kutheni kungekho Jasmine kwiTea yeJasmine?
Mhlawumbi uya kuziva udidekile malunga nokuba kutheni ngamanye amaxesha awukwazi ukubona i-jasmine kwiti ye-jasmine yaseTshayina.Nangona kukho, kuphela iipetali ezimbalwa ezomisiweyo ze-jasmine ziya kusetyenziselwa ukuhlobisa.
Ngokwenyani, uhlobo "lweti yejasmine" ngaphandle kwamagqabi eti yi-jasmine herbal tea, hayi iti yejasmine.
Ngokufanelekileyo, unokuba nemibuzo elandelayo:
1. Kutheni iti yejasmine isenayo ivumba elimnandi lejasmine xa ungaziboni iintyatyambo zejasmine?
: Oku kuhla kwenye yeenkqubo zokuvelisa iti ye-jasmine - ukuvumba, okuyinkqubo yeentyatyambo ze-jasmine zikhupha ivumba elimnandi, amagqabi eti afunxa ivumba elimnandi, kwaye amagqabi eti ekugqibeleni adibane nevumba lentyatyambo.Le nkqubo ithatha iiyure ezili-12 ukuya kwezili-14.Iti ye-jasmine yesiko kufuneka ihambe ngeendlela ezininzi "zokuvumba".Yiyo loo nto iti yejasmine inevumba elimnandi lejasmine nokuba awukwazi ukubona iintyatyambo zejasmine.
2. Kutheni iti yejasmine isenevumba elimnandi lejasmine xa ungaziboni iintyatyambo zejasmine?
: Ngenxa yokuba iti inamandla okubhengeza, amagqabi eti alifunxe ngokupheleleyo ivumba lejasmine.Ngaphandle koko, iipetali ezishiyekileyo ezityheli ziya kuchaphazela incasa yeti ukuba azihlukaniswanga.
3. Ngaba iti yeJasmine eneentyantyambo imbi kunezo zingenantyatyambo?
: Akunjalo.Ezinye iiti ze-jasmine eziphezulu ziya kukhetha iintyatyambo ze-jasmine ezikumgangatho ophezulu kwaye zomise kwimveliso egqityiweyo.Ixabiso elincinci leentyatyambo ze-jasmine ezomileyo ezingakhange zibe nevumba aziyi kuchaphazela i-taste of tea kwaye zithandeka ngakumbi ukongeza kwi-tea.